Izithelo zePomelo: izakhiwo ezizuzisayo futhi zilimaza ushukela > Ukudla ngesifo sikashukela
I-Pomelo - ingabe izithelo zilusizo noma zilimaza ushukela?
IPomelo isithelo esikhulu sasemuva somndeni wamawolinshi. Uyisihlobo esiseduze samagilebhisi, kepha akanalo ulaka olunje. IPomelo inezici ezinhle ezenza kube umkhiqizo obalulekile wokudla, okhonjelwe izifo eziningi.
Ngakho-ke i-pomelo isiza ukugcwalisa ukusweleka kwamavithamini namaminerali, ithuthukise uhlelo lokugaya ukudla futhi ithuthukise imisebenzi yokuvikela umzimba. Kepha abantu abaningi abanoshukela wegazi ophakeme bayathanda lo mbuzo: kungenzeka yini ukudla i-pomelo enoshukela?
Ukuzwisisa le nkinga, kufanele uthole ukwakheka kwenkomba ye-pomelo glycemic yalesi sithelo nokuthi unamthelela muni emzimbeni wesifo sikashukela. Ngemuva kwakho konke, kuyaziwa ukuthi ukutholakala kwesifo sikashukela sohlobo 2 kusho ukugcinwa kokudla okuqinile nokwenqatshwa kwemikhiqizo eminingi, kufaka phakathi izinhlobo ezithile zezithelo.
UPomelo ukhula eChina naseNingizimu-mpumalanga ye-Asia, lapho lesi sithelo sesidliwe isikhathi eside ngabahlali bendawo. Ungaba nobumba obuyindilinga noma oblong nokukhanya okuncane okuluhlaza okokukhanya okuphuzi okukhanyayo. UPomelo unobukhulu obuhlaba umxhwele kakhulu. Ububanzi balesi sithelo bungaba ngu-30 cm, kanti isisindo singafinyelela ku-10 kg. Kepha ngokwesilinganiso, lesi sithelo sinesisindo esingu-2-3 kg.
I-pomelo ine-ikhasi eliminyene kakhulu, elihlukaniswa kalula nge-pulp. Ukunambitheka kwe-pompelmus, njengoba i-pomelo ibizwa nangokuthi, imnandi kakhulu kunegilebhisi, kepha ayinamnandi kangako. Ungadla i-pomelo kanye ne-grapefruit - usike ngesiqingatha bese ukha phezulu uginindela ngesipuni.
IPomelo inokwakheka okuhle kakhulu nobubanzi bezakhiwo ezizuzisayo. Ngakho-ke, sekungokunye kokudla okuthandayo kubo bonke abalandeli bempilo enempilo nabantu abanezifo ezingamahlalakhona.
Ukwakhiwa kwezithelo zePomelo:
Amavithamini: A, C, B1, B2, B6, E, PP,
Amaminerali: i-magnesium, i-phosphorus, i-calcium, i-potassium, i-selenium, i-sodium, i-iron,
I-fiber fiber, ama-pectins,
Amafutha kanye ne-organic acid
Izici eziwusizo ze-pomelo ezinesifo sikashukela sohlobo 2
IPomelo ingesinye sezithelo ezizuzisa kakhulu ezigulini ezitholakala zinesifo sikashukela. Okuqukethwe kwekhalori yayo kungama-32 kcal kuphela nge-100 g yomkhiqizo. Ngakho-ke, i-pamela enesifo sikashukela sohlobo 2 inomthelela ekushisweni kwamaphawundi angeziwe kanye nokujwayelekile kwesisindo.
Izithelo ezivuthiwe ze-pomelo zingaquki ama-carbohydrate ayi-6.7 g, okuyingxenye yesinkwa. Amafutha namaprotheni akulesi sithelo cishe awekho ngokuphelele. Cishe ama-88% we-pomelo angamanzi, ngakho-ke ungenza ujusi omnandi kakhulu futhi onempilo kuwo.
Inkomba ye-glycemic ye-pomelo ingama-42 gi, okungelinye lamanani aphansi kakhulu phakathi kwezithelo. Ngalesi sizathu, i-pomelo yesifo sikashukela ithathwa njengesithelo esifanele esivunyelwe ukudliwa nsuku zonke. Alikhuphi ushukela wegazi futhi alinikezi ingcindezi kuma-pancreas.
Izici eziwusizo ze-pomelo ezinesifo sikashukela sohlobo 2:
Ekhuluma ngezakhiwo ze-pomelo ezinhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, umuntu akakwazi ukusiza kodwa usho ukulimala kwayo okungenzeka. Ngakho-ke lesi sithelo sincishiswe ngokuqinile kwiziguli ezinokungezwani nezithelo zikawolintshi. Ngaphezu kwalokho, i-pamela kufanele ifakwe ngokucophelela ekudleni kwezingane ezineminyaka eyi-1-2, ngoba lokhu kungadala ukusabela okungalindelekile.
Kepha izinzuzo nokulimazeka kwale fetus akuhlukani. Izithelo zikaPamela ngesifo sikashukela sohlobo 2 kungenye yemikhiqizo ebaluleke kakhulu yokudla, ukusetshenziswa kwayo kungamisa ukuthuthukiswa kwalesi sifo. Ngakho-ke, kungenzeka ukuthi usebenzise i-pomelo kumashukela sikashukela ngaphandle kokusaba.
IPomelo isithelo esinempilo ukwedlula i-grapefruit noma i-sweetie yesifo sikashukela. Lezi zithelo ezimbili ziyizihlobo ezisondele kakhulu ze-pomelo.
Kepha ngokungafani negilebhisi futhi elimnandi, i-pomelo iqukethe amakhalori ambalwa nama-carbohydrate, okubaluleke kakhulu kwi-hyperglycemia.
Ungayidla kanjani i-pomelo enoshukela
Ngohlobo 2 sikashukela, isiguli sivunyelwe ukudla ama-200 g we-pulp yezithelo noma i-150 ml yejusi elisanda kufakwa nsuku zonke. Kodwa-ke, uginindela we-pomelo ulusizo kakhulu kunejusi, ngoba uqukethe inani elikhulu le-fiber kanye nama-pectin, okuvimbela ukwanda koshukela wegazi.
Ngaphambi kokusetshenziswa, i-pomelo kufanele ihlolwe, ihlukaniswe ngezigaba ezinkulu bese isusa ngokucophelela ifilimu esobala. Ngokunambitheka kwakhe, cishe akukho sici esimuncu sazo zonke izithelo zezithelo. Kepha ine-phunga elimnandi nobumnandi obumnandi.
IPomelo isithelo esikhulu kakhulu esingedliwe ngosuku olulodwa. Ngaphezu kwalokho, inani elinjalo le-pulp lihlaselwe ngokuphula ukuthathwa kwe-glucose. Ngakho-ke, lesi sithelo kufanele sihlukaniswe izingxenye ezidingekayo futhi sigcinwe esiqandisini ukuze singalahlekelwa yizinto ezizuzisayo.
Ngaphezu kwalokho, ungenza ijusi elihlwabusayo kusuka ku-pomelo usebenzisa i-juicer engeyona insimbi. Lokhu kuzokonga inani eliphezulu lezakhamzimba ezibalulekile emzimbeni, ezibuthakathaka yisifo sikashukela.
I-Pomelo pulp ingangezwa kumasaladi ezithelo nemifino, yoghurt engenashukela ngisho nasezitsheni ezishisayo. Izilayi zalesi sithelo zivame ukusetshenziselwa ukuhlobisa izitsha zenyama nezinhlanzi, okunikeza ukunambitheka kwasekuqaleni kanye ne-acidity ekhanyayo.
Isaladi lesaladi lasehlobo.
UPomelo - 1 pc.,
I-Shrimp - 100 g
Ubhontshisi wezintambo - 100 g,
I-Lettuce - 100 g
Amafutha omnqumo - 2 tbsp. nezinkezo
Isinaphi - 1 ithisipuni,
Usawoti kanye nopelepele omnyama ukunambitha,
Bilisa ubhontshisi oluhlaza emanzini abilayo imizuzu engu-8. Ubilise shrimps kuze ithenda. Hlambulula ngokucophelela futhi ulethisi amaqabunga abe izicucu. Ukusuka izithelo, pomelo usike cishe 1/3 yengxenye bese uyicwilisa esikhunjeni namafilimu. UPomelo uhlukanise i-pulp ibe izingxenye ezincane bese uwahlanganisa esitsheni ngobhontshisi, ulethisi kanye ne-shrimp.
Ngendebe ehlukile, hlanganisa i-oyela, uju, usawoti, upelepele kanye nesinaphi. Hlulela kahle bese uthela ukugqoka kwesaladi. Fafaza amacembe e-alimondi phezulu. Le isaladi ilungele kahle njengesidlo sakusihlwa sabanesifo sikashukela. Iyangenwa kalula futhi ayifaki ingcindezi kuma-pancreas.
Isaladi nge-pomelo, usalimoni kanye no-lentil.
I-Salmon kushukela wayo - 100 g,
Izilonda - 100 g
Isaladi le-Arugula - 70 g,
Impompo kaPomelo - 100 g,
Amafutha omnqumo - 2 tbsp. l
Amatshe okuvula avuleke kuze kulungiselelwe ngokuphelele. Dice ifayili le-salmon. Inyama iyahlanzwa kusuka kwifilimu nasemithanjeni, ihlukaniswe izingcezu ezincane. Hlambulula i-arugula emanzini bese uyikhetha ezandleni zezingcezu eziningana. Hlanganisa zonke izithako epuleti elikhulu, usawoti, engeza uwoyela omnqumo uhlanganise kahle.
Isaladi elinjalo kufanele lidliwe ngokushesha ngemuva kokulungiswa. Lesi sidlo sishiya ikhalori ephansi futhi cishe asinawo ama-carbohydrate, ngakho-ke kufanelekile ngisho nokudla kweprotheni kashukela.
Izinzuzo kanye nokulimala komshanelo kuchazwe kuvidiyo kule ndatshana.
IPomelo isithelo esiluhlaza ngokufana imibala ngaphandle kwamabala noma imivimbo. Ngobukhona bezinto eziwusizo nephunga le-citrus, abaningi bavame ukukuxubanisa nogilebhisi, aziwa kakhulu ngokuthi yi- - grapefruit yesiShayina.
Lo mkhiqizo wamawolintshi uqukethe inani elikhulu lamavithamini namaminerali awusizo, kufaka:
Amaminerali: potassium, sodium, iron, phosphorus, magnesium.
Amavithamini: A, C, iqembu B.
Ama-acid amaningi awusizo.
I-fiber yokudla (i-fiber).
Ngenxa yezinto eziningi ezinjalo zohlobo 2 sikashukela, i-pomelo ijwayelekile. Kepha alikwazi ukusetshenziswa ngokungalawuleki. Noma yimiphi imikhiqizo yalesi sifo kufanele idliwe ngokulinganisela.
Izinzuzo nemiphumela emibi yezithelo zomzimba
I-Pomelo inezindawo zayo ezizuzisayo nemiphumela emibi ezinhlelweni ezikhona emzimbeni wesifo sikashukela. Ijusi yezithelo esanda kufakwa nayo ibaluleke kakhulu ekusekeleni ukusebenza kwezitho ezikulesi sifo.
Ngabe yini inzuzo nokulinyazwa kwezithelo zamawolintshi?
Kusetshenziswa lo mkhiqizo ekudleni, abanesifo sikashukela akufanele bakhathazeke ngokukhuluphala ngokweqile. Ngaphezu kweqiniso lokuthi umshanelo uqobo awulethi amakhilogremu angeziwe (okuqukethwe kwawo kwekhalori kungama-35 kcal), kuyasiza futhi ukunciphisa isisindo kancane kancane. Le nto yikhono layo lokubhidliza amafutha, ngoba iqukethe ama-enzyme athile walokhu.
Ngenxa yokuqukethwe kwezinto zokulandela umkhondo, lo mkhiqizo wamawolinshi nojusi wawo kunomthelela ekucebiseni ubuchopho ngomoya-mpilo. I-Pomelo yohlobo 2 sikashukela i-mellitus ivuselela ukusebenza kwengqondo okusebenzayo (i-potassium iyasiza), yenza izicubu zomzimba zibe lukhuni (i-sodium), inomthelela ekusebenzeni okujwayelekile kwemisipha yenhliziyo, inciphisa ingozi yokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa yi-phosphorus.
UPomelo onesifo sikashukela unakekela isimo sesikhumba, uhlanza amathumbu ubuthi. Kuyasiza ngokuphelele ukuguqula imiphumela yamagciwane ahlukahlukene we-pathogenic emathunjini. Ngenxa yezakhiwo zawo, lo mkhiqizo wamawolintshi usiza ukuqinisa ukungatheleleki komzimba, ngoba ukungabi bikho kwezitshalo ezingena emzimbeni emathunjini kusiza ekwakheni impendulo efanelekile yomzimba.
Ngosizo lwalesi sithelo, inqubo yokuhlanganiswa kwama-enzyme nama-hormone yenziwa yenziwa yajwayelekile, iyabandakanyeka ekuvumelweni kwe-hemoglobin egazini. Kuma-diabetes, izinga le-hemoglobin ejwayelekile libaluleke kakhulu, ngoba izinga eliphansi liholela ku-anemia (okuthi isifo sikashukela sikhathaze impilo yomuntu kuphela), futhi eliphakeme liholele ekuqineni kwegazi, okwandisa ubungozi bokuhlaselwa yisifo senhliziyo nokushaywa unhlangothi.
Izinto ezilandelwayo zomkhiqizo wamawolintshi zisiza ukuqinisa umfutho wegazi nokulwa nokuvaleka kwemithambo ngama-cholesterol plaques. Ngesifo sikashukela, imithambo yegazi ingenye yezindawo ezibuthakathaka. Bajwayele ukuqhuma, ukulahleka kokuqina, kube brittle. UPamelo usiza ukubuyisela ukuqina uma kudliwe ngendlela efanele futhi kuhlale kudliwa.
Sifunde ngezinzuzo zezithelo, kodwa ungazi kanjani ukuthi kungenzeka yini ukuthi udle i-pomelo enoshukela, ngoba nayo inoshukela?
IPomelo iyingozi futhi ujusi wayo ungaletha uma ikhona kakhulu. Uma isiguli esinesifo sikashukela i-mellitus sinezinga lokushintsha ushukela njalo futhi isifo sishubile, kungcono ukwenqaba ukudla i-pomelo. Noma yiluphi ushintsho ekudleni, ukwethulwa kwezitsha ezivela kulesi sithelo noma ujusi wazo lapho kufanele kuxoxiswane nodokotela wakho.
UPomelo nesifo sikashukela
BUFUNDI Bethu BUFUNDA!
Imenyu yesifo sikashukela ayinakubizwa ngokuthi ihluke kakhulu, ngakho-ke wonke umkhiqizo ubalulekile, ongafakwa ekudleni kweziguli. Amaswidi amaningi, izithelo, nezinye izinto ezinhle ohlwini olusenqatshelwe. Ngenhlanhla, kunezithelo ezihlwabusayo nezingenangozi njenge-pomelo.
Kungenzeka yini ukudla i-pomelo enohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela?
Izici eziwusizo ze-pomelo
Mangaki ama-pomelo angaqedwa kushukela?
Kukuziphi izindlela ezisezingeni eliphezulu ukusebenzisa i-pomelo diabetesics?
I-Pomelo iyisithelo sase-China esiya ngokuya sivama kakhulu kubantu abahlushwa uhlobo 1 nesifo sikashukela. I-Pomelo ayivunyelwe kuphela, kepha futhi inconyelwe ukusetshenziswa nalesi sifo, ngoba inezinto eziningi ezisebenzayo ezinomphumela omuhle futhi wokupholisa emzimbeni.
Inkomba ye-glycemic ye-pomelo ayidluli amayunithi angama-30, ngakho-ke iphephe ngokuphelele kwabanesifo sikashukela.
Lesi sithelo, esifana neorenji enkulu, siqukethe izinto eziningi ezilusizo:
potassium, isici esiyisisekelo sokulandela umkhondo esicebisa isithelo ngohlu oluphelele lwezindawo ezibalulekile kwabanesifo sikashukela - 250 mg nge-100 g yamapulpiti,
Vitamin C - cishe ama-50 mg
i-beta-carotene - cishe ama-30 mg,
phosphorus ne-calcium - kusuka ku-20 kuye ku-25 mg,
i-iron ne-sodium - kusuka ku-0,5 kuye ku-1 mg,
Vitamin B5 - 0.1-0.3 mg,
Amavithamini B1 no-B2 - ngaphansi kuka-0,1 mg.
Ngenxa yalokhu kuhlanganiswa, i-pomelo inohlu olukhulu lwezakhiwo eziwusizo. Umhlomulo omkhulu kakhulu emzimbeni yi-potassium, i-vithamini C, ne-beta-carotene, okuyingxenye yezithelo, imiphumela emihle okuxoxwe ngayo ngokuningiliziwe ezingxenyeni ezithintekayo zombhalo.
Njengoba amavithamini C, aqukethe inani elikhulu ku-pomelo, asiza ukuqinisa futhi aphulukise imikhumbi, ilusizo kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela. Ngalesi sifo, izindonga zemikhumbi zonakala ngokushesha, ziphelelwe amandla, ngenxa yokuthi izicubu ziswele i-oksijini nezakhi zomzimba ezidingekayo. Ngenxa yalokhu, isiguli sinezinkinga zesifo sikashukela ebezingagwenywa ngokudla njalo i-Vitamin C.
Le vithamini ingasebenza njengendlela yokulwa nobuthi.
Amandla okusebenzisa i-Vitamin C njenge-antidoteote efanele ibaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela, ngoba kumuntu onesifo sikashukela, ukuphuma kwegazi kuvame ukwehla, okuholela ekuqokelelekeni kwezinto ezinobuthi kanye nosheyizeni olandelayo.
Nge-cataralog nezinye izifo zamehlo, okuyizinkinga ezijwayelekile zesifo sikashukela, uvithamini C naye ubalulekile. Imisa ukuthuthukiswa kwezifo eziningi zamehlo, ingavumeli i-visual acuity, futhi inciphise ukukhathazeka kwamehlo nokukhathala kwamehlo.
Ngenxa yokuthi le vithamini isiza umzimba ukuthi uhlanganise i-hemoglobin, isiguli sikashukela sithola ithuba lokwelapha i-anemia noma sisheshe siphinde silivule umthamo wegazi lapho elahlekile.
IVithamini C futhi ivimbela ukulahleka kokuzwela okuyingxenye yalesi sifo.
I-pomelo iqukethe i-beta-carotene, eguqulwa ibe ngu-vithamini A ngenxa yemiphumela yama-enzyme athile abantu. Ngenxa yokuthi i-pomelo ayiqukethe i-vitamin A emsulwa, iba nzima ukwedlula, okuyingozi kakhulu kwabanesifo sikashukela. Ngasikhathi sinye, i-overdose ye-beta-carotene ayinangozi ngokuphelele.
IVitamin A inezici eziningi eziyisimangaliso iziguli zesifo sikashukela ezizoyazisa:
ukusheshiswa kokuphulukiswa kwezindawo ezilimele,
ukuvimbela isifo sikashukela i-retinopathy
ukwenza ngcono ukusebenza kwamasosha omzimba.
Ukuntuleka kwe-potassium kushukela kuholela ku:
Ukugwema lezi zinhlupho ezingenhla nezinye eziningi, kuyadingeka ukusebenzisa inani elanele le-potassium, eliqukethwe kwi-pomelo.
Le nto yokulandela inikela ku:
Ukuqedwa kwe-edema ngenxa yomthelela omnene we-diuretic,
ukulungiswa kwemisipha yenhliziyo,
ukuhlangana kokushayela ngamandla
ukususwa kukasawoti oyingozi ezindongeni zemithambo yegazi.
Isenzo se-potassium kumangqamuzana omzimba sifana kakhulu ne-insulin: sakha i-glycogen kusuka ku-glucose engena emzimbeni, futhi futhi ithuthukise ukunqotshwa kweseli. Ngenxa yalokhu, i-potassium ilwa ngempumelelo nezimpawu ezingathandeki kakhulu zesifo sikashukela, njenge, ngokwesibonelo:
ukuzwa kanye nokulahlekelwa umuzwa,
amathumba nezilonda esikhunjeni.
Ezinye izinto ezizuzisayo
Amanye ama-macronutrients, ama-trace element, amaminerali namavithamini akha izithelo zaphesheya anezindawo eziningi ezizuzisayo zabanesifo sikashukela:
yakha futhi iqinise izicubu zamathambo ezilinyazwe yilesi sifo,
lawula inani le-hemoglobin esegazini,
iba nomphumela omuhle esizikhumbeni, okuthi ngesikhathi sokukhula kwesifo iba ngumile futhi ibe nomzimba,
asize umsebenzi wezinso, izicubu zenhliziyo, umgudu wesisu, usebenza ngomthwalo owengeziwe,
thuthukisa ukuqina kwegazi, okuba yinto ebonakalayo ngokweqile futhi ibe mninzi ngesifo sikashukela.
IPomelo "ibhomu" elimnandi, elinamandla elivikelekile kwabanesifo sikashukela. Vele, noma usebenzisa umkhiqizo ongenabungozi kakhulu, kuyadingeka ukuhambisana nokubonakalayo.
Ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2, ungadla ngokuphepha amagremu ama-200 we-pulp enamanzi ngosuku.
Mhlawumbe udokotela wakho uzobheka ukuthi ungadla i-pomelo ngamanani amakhulu (kuze kufike ku-500 amagremu ngosuku), kepha ngaphandle kokubonisana nodokotela, akunconywa ukwandisa umthamo ovunyelwe.
Uma ungayithandi ngempela i-pomelo ngesimo sesithelo esiphelele, futhi ukhetha ijusi elenziwe kuyo, khumbula ukuthi awukwazi ukuphuza ujusi ongaphezudlwana kuka-100 wosuku ngosuku. Ngaphezu kwalokho, kungcono ukuphuza ujusi hhayi esiswini esingenalutho, kodwa ngokushesha ngemuva kokudla okunenhliziyo.
Ngesifo sikashukela, i-pomelo ivunyelwe ukusetshenziswa:
njengesitsha esizimele ngesimo sezithelo zonke (okusebenziseka kakhulu, ngoba hhayi kuphela isakhi soketshezi esingena esiswini, kodwa ne-fiber yokudla, enomphumela omuhle emathunjini),
ngesimo sejusi esisanda kufakwa (akunconyelwe ukusebenzisa izithako zejusi ezenziwe ngensimbi ukuthola ujusi, ngoba uma ihlangene nayo, ukusabela kwamakhemikhali kulimaza amavithamini amaningi nezinto ezizuzisayo),
njengesithako esengeziwe noma esiyinhloko sesitsha sokudla (i-pomelo ihamba kahle ngama-apula, ulethisi, inyama, inhlanzi ebomvu).
Kwenqatshelwe ukuxuba i-pomelo nemikhiqizo ethile ekhulisa inkomba yayo ye-glycemic. Ikakhulu, musa:
ukugcwalisa i-yogurt ibe yizicucu ngezithelo (kokubili okumnandi nemvelo ngaphandle kwezithasiselo), ukhilimu omuncu, ibhotela, njll.
yisebenzise njengenye yezithako zamasaladi ezithelo (okuwukuphela kwesaladi lesithelo elinomkhamo onesiguli sikashukela ongakwazi ukulenza isaladi lamagremu angama-200 ama-apula omuncu omuncu kanye namagremu ayi-200 we-pomelo pulp),
nambitha, okungukuthi, uthele uju noma ufafaze ushukela.
Uma umuntu onesifo sikashukela engahlushwa yimiphumela yezithelo zezithelo zomndeni wamawolintshi, okungaholela ekuqeshiseni nakweminye imiphumela eyingozi, khona-ke kukhona okumbalwa kakhulu okusetshenziselwa ukuphikisana:
Izinkinga zesisu ezivame kushukela likashukela (i-acidity ephezulu, izilonda),
i-colitis kanye nephritis, ekhuphuka ngohlobo 1 no-2 sikashukela.
Ukuthola i-pomelo ekusetshenzisweni kuphela, kubalulekile ukucabanga ngezexwayiso ezimbalwa:
ungadli i-broomstick ngokungalawuleki futhi wedlule umthamo othuthaziwe,
ungathengi isidali esidala, i-stale, izithelo ezivuthiwe,
Akunconyelwe ukusebenzisa lesi sithelo kanye neminye imikhiqizo engahambelani.
Ukwazi ukuthi yiziphi ezinye izithelo ongazidla ngesifo sikashukela, funda lokhu okulandelayo: http://diabet.biz/pitanie/produkty/frukty/kakie-mozhno-est-frukty-pri-saharnom-diabete.html.
IPomelo ingumkhiqizo oneswekile onesifo sikashukela, ngenxa yokunambitheka kwawo okumnandi futhi okusha, kusiza ukwehluka ekudleni okunamafutha, okubandakanya izithako ezintsha. I-pomelo futhi iqukethe izinto ezizuzisayo ezinomphumela omuhle empilweni yabanesifo sikashukela.
Mayelana nezinzuzo zokuzila ukudla
Abaphenyi abaningi bayaqiniseka ukuthi ukubulawa yindlala noma ukuncipha kwenani lokudla ngosuku, ikakhulukazi izithelo ezomisiwe, kungahle kunciphise ukuqina kwalesi sifo, noma kuphulukisa ngokuphelele isifo sikashukela. Kuyaziwa ukuthi i-insulin ingena egazini ngemuva kokuba ukudla kungenwe emzimbeni. Kulokhu, iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lokuqala nolwesibili ziyafakelwa ekudleni okuvamile kokudla nezisobho, okubuye kwandise isilinganiso se-insulin egazini.
Labo abaqhuba ukwelashwa kwesifo sikashukela ngendlala bakhomba ukufana phakathi kwezakhi zegazi hhayi nje kuphela kodwa nomchamo kokunye kwabanesifo sikashukela nalabo ababulawa yindlala. Isizathu esiholela ekuguqukeni okufanayo kwamapharamitha womzimba uhlala unjalo:
endaweni yesibindi, izinqolobane zezinto eziningi ziyancishiswa, kufaka phakathi i-glycogen, inxephezelwe utamatisi,
umzimba uqala ukuhlanganisa zonke izinsiza zangaphakathi,
amanoni agcinwe acutshungulwa kuma-carbohydrate,
ama-ketones nephunga elithile le- “acetone” akakhiwa hhayi ngomchamo kuphela, kepha nangamathe.
Ukuze ugweme lokhu, kuye kwenziwa ukwelashwa okuhlanza umzimba okhethekile, okuyindlala, ukwenqatshwa kwe-pomelo enesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo.
Mayelana namanani endlala
Ochwepheshe emhlabeni wonke banesiqiniseko sokuthi ukwelashwa okusheshayo kwesifo sikashukela akwamukeleki nje kuphela, kodwa futhi kulusizo kakhulu. Ngasikhathi sinye, ukuphulukiswa kwendlala okufushane ngesifo esiveziwe (okungukuthi, usuku nosuku) kunganikeza umphumela omncane nje, njengama-mandarin.
Noma ngubani ofuna ngempela ukunqoba ukugula kwakhe kohlobo lokuqala noma lwesibili, umane ophoqelekile ukwenza izinkanyezi ezahlukahlukene: ukusuka esikhathini esimaphakathi kuya ezinkathini ezinde. Ngasikhathi sinye, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi, hhayi olunye uketshezi, kufanele kube ngaphezu kwenele - kuze kufike kumalitha amathathu njalo ngamahora angama-24. Kulesi simo kuphela, impahla yokwelapha ethola ukudla okusheshayo neyakhiwe sikashukela iphelele.
Uma umuntu ebulawa yindlala okokuqala, kufanele enze le nqubo esibhedlela.
Lokhu kumele kube ngumtholampilo okhethekile, ngoba ukulawula isazi sokudla kubaluleke kakhulu, ikakhulukazi maqondana nesifo sikashukela sohlobo 2.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kuzolunga kakhulu izinsuku ezimbili noma ezintathu:
yidla ukudla okunconyelwe isitshalo kuphela
kudla okungenani ama-30 hhayi ngaphezulu kwama-50 g wamafutha omnqumo ngosuku.
Kodwa ngaphambi kokungenela inqubo yokwelashwa ngendlala, kufanele kwenziwe i-enema ekhethekile yokuhlanzwa. Kuzosiza ukwenza ukwelashwa okuhambisana nokuzila ukudla kanye nokwakha ushukela kuphelele futhi, ngasikhathi sinye, kube lula.
Ngemuva kokuvela kwenkinga ye-hypoglycemic (imvamisa lokhu kwenzeka ezinsukwini ezine kuya kweziyisithupha ngemuva kokuba indlala isiqalile), iphunga elibi le-acetone kusuka emgodini womlomo liyanyamalala. Lokhu kusho ukuthi isilinganiso sama-ketones egazini lomuntu saqala ukuncipha. Isilinganiso se-glucose kuleli cala sizinzile ngokuphelele futhi sihlala sisimilo kuyo yonke inqubo yokuzila ukudla.
Kulesi sigaba, zonke izinqubo ze-metabolic emzimbeni wesifo sikashukela zifika esimweni esijwayelekile, futhi isilinganiso somthwalo kuma-pancreas nesifunda sesibindi sincishiswa kakhulu. Zonke izimpawu zanoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela nazo ziyanyamalala.
Iphuzu elibalulekile ukungena kokulamba. Kuzoba okulungile kakhulu ukuqala lokhu ngokuthatha uketshezi oluthile lwezakhi:
ujusi wemifino, oxutshwe namanzi,
ujusi wemvelo ovela kwimifino,
I-Whey yemvelaphi yobisi,
Ezinsukwini ezimbalwa zokuqala kusuka kumenyu, kufanele ungafaki ngokuphelele isakhi esinosawoti, kanye nalolo kudla okuso okunamaprotheni amaningi. Kuzoba wusizo kunoma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela. Isaladi yemifino nezithelo, isobho elinamafutha amancane, ama-walnuts azokwenza ukuthi kulondolozwe umphumela owatholwa ngenxa yokuzila ukudla ngokuphelele. Bangasebenza njengethuluzi elilungile ekuvinjelweni kwezinkinga ezinjalo ngemilenze yonyawo lwesifo sikashukela nabanye abaningi. Ngemuva kwakho konke, ukwelashwa kwabo kudingekile nje.
Odokotela abaningi bagcizelela ukuthi ngenkathi beshiya ushukela (futhi uma kungenzeka, ngokuzayo) bangadli ukudla okudlula kabili ngosuku. Uma lilincane inani lokudla, okuncane kuzoba ukukhululwa kwe-insulin yegazi egazini.
Ngasikhathi sinye, isilinganiso se-hormone esiza egazini ngasikhathi sisuka esibalweni sokudla asilondeki, kodwa, kunalokho, sincane.
Ngakho-ke, ukwelashwa okubandakanya ukubulawa yindlala kushukela akuyona nje enye indlela yokuvimbela. Kungaba yindlela ekahle yokusindiswa kwesifo sikashukela sanoma yiluphi uhlobo, phakathi kwayo wonke ama-nuances nezindlela okufanele kubhekwe ngazo.
Isithelo se-pomelo sifanekiselwa isithelo esilingana nombala we-tint eluhlaza ngaphandle kokuba namabala, imivimbo. Ngokubakhona kwezinto eziwusizo nephunga lewolintshi, iningi le-pomelo lididekile nogilebhisi. Phakathi kwabantu, izithelo zibizwa ngokuthi yi-Chinese grapefruit.
Okuqukethwe kwekhalori kwe-citrus kungama-32 kcal. Inkomba ye-glycemic ingama-30, ekuvumela ukuthi udle umbungu onesifo sikashukela.
Kule citrus kunamaminerali amaningi awusizo, amavithamini.
Kwamaminerali, izithelo zigcwele i-potassium, i-sodium, i-iron, i-phosphorus, ne-magnesium.
Amavithamini - amaqembu B, A, C.
I-fiber yokudla - i-fiber.
Ama-antioxidants akhona ku-citrus ukuvikela ukuguga okusheshayo.
Ngenxa yohlu lwezakhi ezisefomeni lesibili lesifo sikashukela, i-citrus ivame kakhulu. Kodwa-ke, kwenqatshelwe ukudla i-pomelo diabetesics ngokungalawuleki. Noma iyiphi i-citrus ekwelashweni kashukela isetshenziswa ngokulinganisela.
Ungakudla okungakanani i-pomelo diabetesic
Ukuba nezakhiwo eziwusizo, umkhiqizo ubangela ukulimala. Ukusongelwa kwe-citrus kanye nejusi yayo kungavusa ukuthi usebenzise nini i-pomelo ezingxenyeni ezinkulu. Uma umuntu onesifo sikashukela eshintsha njalo ushukela, futhi isifo sibi kakhulu, yeka ukuthatha izithelo. Futhi, ungadli isithelo uma ungadli izithelo zezithelo zamawolintshi, ngaphandle kwalokho kungenzeka ukuthuthukisa i-hyperemia, i-edema kaQuincke.
Lapho kukhona isilonda esiswini, isilonda se-duodenal, i-gastritis, i-acidity ephezulu, ukuthatha izithelo kuzokhulisa isimo sesifo, kuvuse nemiphumela.
Uma i-nephritis, i-hepatitis, i-colitis ikhona, ukuphatha kufanele kuqaphele ukukhipha ukuwohloka.
Kunconywe ukufaka ngokucophelela ithumbu etafuleni lezingane ezingaphansi kweminyaka engu-2 ubudala, ngoba kungavusa ukusabela okungalindelekile. Noma yikuphi ukushintshwa kokudla okunempilo, ukwenza izitsha ezibandakanya umkhiqizo kuxoxwa nodokotela.
Kubalulekile ukwazi ukuthi ngokudla izithelo njalo - lokhu kuzosiza isiguli, kepha esimweni sedosi elingalungile - ngokuhlukile.
Kunconywa ukuthi uma kwenzeka kutholakala isifo sikashukela sohlobo 2, i-pomelo idla amagremu angama-150-200 we-pulp noma i-100-150 ml yejusi. I-GI ingama-30, ekuvumela ukuthi ufake namawolintshi ekudleni kwakho nsuku zonke.
Kuyadingeka ukunikeza ingane ngokucophelela ezinganeni engakakakhiwa ngokuphelele umzimba wayo. Kuyalulekwa ukuthi uqale ngamagremu ambalwa, bese kuthi, uma ubheka impendulo yomzimba, ufake ivolumu ephelele.
Izindlela zokusebenzisa uPomelo
Indlela ejwayelekile yokufaka isicelo se-pomelo yabanesifo sikashukela kusimo sayo esingavuthiwe. Isisindo esijwayelekile se-fetus silingana ne-1 kg. Kuyalulekwa ukuthi ungasidli izithelo ngokushesha, kodwa ukuhlukanise kube izingxenye. Lokhu kuzosindisa zonke izinto ezizuzisayo zomzimba, ngaphandle kwe-overdose.
Ijusi yezithelo iyathandwa. Kunconywa ukuyihlikihla usebenzisa ijozi lensimbi, futhi ukwenze ngesandla. Ngakho gcina zonke izakhiwo eziwusizo zomkhiqizo. Imvamisa isetshenziswa njengomhlobiso wama-dessert, ezitsheni zenyama, inhlanzi.
IPomelo nohlobo 2 sikashukela yinhlanganisela enhle. Uma ulandela umumo wansuku zonke, umkhiqizo uyoba nezinzuzo eziningi futhi ujabulise isiguli.
Ungayisebenzisa kanjani i-pomelo, umthamo
IPomelo enesifo sikashukela kufanele isetshenziswe njengokudla, kepha kufanele yenziwe ngokucophelela, ngaphandle kokweqa inani elivumelekile ngosuku. Ijusi yezithelo futhi yona ngokwayo inenkomba ye-glycemic eyamukelekayo kwabanesifo sikashukela, ingamayunithi angama-30, okuyingxenye evamile yeziguli ezinjalo.
Uma usebenzisa umkhiqizo we-citrus kungadluli amagremu ayi-100-150 ngosuku, ngakho-ke kuphephile ngokuphelele ezigulini ezinesifo sikashukela. Masinyane ngemuva kokudla, ungaphuza futhi ujusi wezithelo, kungcono ukungangeqi i-100 ml ngasikhathi.
Ungasebenzisa i-pomelo ngesimo se-pulp emnandi, ujusi, isithako samasaladi ahlukahlukene. Ukuhlanganiswa neminye imikhiqizo kukuvumela ukuthi uzwe ukunambitheka kwangempela kwesitsha, ngenkathi umzimba ugcwele izinto eziwusizo.
IPomelo isithelo esiyingqayizivele esivele emashalofini ethu sivela eSoutheast Asia. Isithelo se-pomelo sikhulu impela, sinephunga elimnandi le-citrus. Izithelo zitholakala ezitolo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka.
Isifo sikashukela mellitus salezi zinhlobo sibangela ushintsho kuzo zonke izinhlelo nezitho zomzimba. Izinto eziyingxenye yesibeletho ziyadingeka ekudleni kwabantu hhayi kwabanesifo sikashukela kuphela, kodwa nabantu abajwayelekile. I-fetus iqukethe inani elikhulu lamaminerali alusizo futhi adingekayo emzimbeni, anezici ezinhle kunoma yimuphi umuntu.
Amavithamini eqembu A, B, C.
Potassium, phosphorus, sodium, iron.
I-Vitamin A ibambezela ukubhujiswa kwamaseli e-pancreatic, ihlukanise izinhlobo ezisebenzayo ze-oxygen, ezikhiqizwa ngesilinganiso esandayo ngesikhathi sokugula. Ngaphezu kwalokho, i-Vitamin A ithuthukisa umbono futhi isekela ukungatheleleki komzimba.
Amavithamini e-B anezakhiwo eziningi ezizuzisayo. Amavithamini alawula i-glucose metabolism, avimbele ukuthuthukiswa kwezinkinga eziningi zesifo sikashukela (i-neuropathy, i-nephropathy, ukubhujiswa kwemithambo). Ngaphezu kwalokho, balawula i-metabolism yamaprotheni, bathuthukise isimo semizwa futhi bathule uhlelo lwezinzwa. Ngaphezu kwalokho, izinto ezilandelwayo zinciphisa isidingo sezicubu ze-insulin, ukusheshisa ukululama kwamaseli, ukuguqula izicubu ze-adipose zibe amandla, okufaka isandla ekunciphiseni isisindo. Ngokubambisana namanye amaqembu amavithamini akhulisa ukubonakala kwamaseli wezicubu ukungena ku-insulin, kuvuse ukwakheka kwe-serotonin.
Vitamin C kumkhiqizo inomphumela onamandla we-antioxidant. Vitamin C isiza ekuvimbeleni izifo eziningi ezifanayo zesifo sikashukela.
Isifo senhliziyo, ukwehluleka kwenhliziyo.
Ukulimala ezinso, ukwehluleka kwezinso.
Isifo sikashukela sonyawo nokuthuthukiswa kwamehlo
Ama-carbohydrate alesi sigaba seziguli yinto eyingozi kakhulu. I-fiber noma i-fiber yokudla nayo i-carbohydrate, kepha yaziwa njengeqembu eliphephe kunazo zonke. Ifayibha inciphisa ukungasebenzi kwesisu, okwehlisa ukwakheka kweglucose. I-Dietary fiber yehlisa i-cholesterol, esiza ukuvikela isifo senhliziyo.
I-Potassium esithelweni iyasiza nokuvikela izifo zenhliziyo nezemithambo. Iron ibandakanyeka ekwakhekeni kwe-hemoglobin. I-phosphorus ivuselela ukusebenza kobuchopho, iyasiza ekulweni nokuqwasha, okuvame ukutholakala kwisifo sikashukela.
I-Pectin ikhona ku-pomelo futhi kwisifo sikashukela kuvamile ukugaya ngokuphuthumisa imetabolism futhi kwehlise i-cholesterol. I-Pectin isusa imikhiqizo ebalulekile, ubuthi obuhlukahlukene, ama-xenobiotic emzimbeni.
Amafutha abalulekile ayaziwa ngezakhiwo zawo ezizuzisayo. Benza ngcono ukugaya, isikhumba nezinwele. Zisiza nokulwa nomzimba obuthakathaka ngamagciwane namagciwane ahlukahlukene.
Ngokubheka ukuthi isithelo sicebile ngezakhi eziwusizo, noma yimuphi udokotela, umondli wezempilo noma i-endocrinologist uzoncoma ukusidla hhayi nje nge-diabetes, kodwa futhi nabantu abavamile. Impahla ewusizo yomkhiqizo sikashukela ukuncipha kwe-glucose, ngakho-ke lapho kudliwa, akukho ukuvuvukala okungazelelwe kushukela.
Okuqukethwe kwekhalori kwesitshalo kucishe kube ngama-kcal angama-40, kuncane kakhulu, ngakho-ke, inzuzo yesisindo ayenzeki lapho ingane idliwa. Noma, ngokuphambene nalokho, kuyadingeka ukuyidla, ngoba umbungu ukhuthaza ukuqhekeka kwamafutha.
I-pomelo elimazayo enesifo sikashukela sohlobo 2 incane futhi kuphela ngokudla ngokweqile noma ukungabekezeleli komuntu ngamunye. Ukungezwani komzimba kungavela, kuyingozi kubantu abanjalo ukukuqeda.Uma umuntu enezindlela ezinzima zesifo, udokotela kufanele avume futhi alungise imenyu. Kodwa-ke, lokhu akusebenzi ekusetshenzisweni kwalesi sitshalo kuphela, kodwa nakwezinye izithelo nemikhiqizo, ngoba kungadalwa ukulimala okukhulu emzimbeni.
Ukudla okwenzelwe uPomelo
Ukudla okusha okusekelwe kwi-pomelo kuyindlela enhle yokunciphisa umzimba ngaphandle kokuyeka izitsha zakho ozithandayo nezihlwabusayo. Sesikhulumile nge-enzyme eyisimangaliso ekwakhiweni kwayo, kodwa inqubo ye-pomelo nayo ingagcwalisa umzimba ngokushesha, igcwalise ngokuphelele indlala isikhathi eside.
Masihlale kwimenyu ekhombisa lokhu kudla ngemininingwane eminingi:
- itiye eliluhlaza ngaphandle koshukela nengxenye eyodwa pomelo.
- isaladi entsha nenhlanzi (inkukhu ebilisiwe) noma imifino ethosiwe, itiye le-herbal, i-pomelo eyodwa.
- isaladi lezithelo nge-yogurt ephansi enamafutha, okubandakanya i-pomelo.
- ukholifulawa othosiwe, itiye le-ginger noju, uhhafu we-pomelo.
- Ucezu olulodwa oluncane lukashizi obunzima, itiye ngaphandle koshukela, i-pomelo eyodwa.
- imifino ethosiwe, ucezu oluncane lwenhlanzi ebilisiwe, itiye ngaphandle koshukela.
- iqanda elilodwa elibilisiwe, uhhafu we-pomelo.
- iqanda elilodwa elibilisiwe, i-apula elilodwa eliluhlaza, i-pomelo eyodwa, itiye ngaphandle koshukela, mhlawumbe amakhambi. Iqanda neapula zingathathelwa indawo yisalifulawa yelekholifulawa.
Usuku lwesithathu: phinda njengokuqala.
Ukudla okunjalo kuthatha izinsuku ezintathu futhi kungabhekwa njengokuhlanzwa kwakho, kukuvumela ukuthi ususe umzimba wakho kubuthi obungenasidingo nezinto eziyingozi futhi ubuyisele ukuvumelana emathunjini. Usebenzisa i-pomelo yokunciphisa isisindo njalo ekuseni, ungafinyelela umphumela oyifunayo ezinyangeni ezimbalwa, okungagcini nje ngokushesha, kodwa futhi nokunambitheka kakhulu.
Isixwayiso: Musa ukusebenzisa lesi sithelo kubantu abanomlando wokungezwani nezithelo zikawolintshi, abanezilonda ezi-peptic kanye ne-acidity eyandisiwe yesisu.
Izithako: i-pomelo eyodwa, ulethisi, uwoyela womnqumo, usawoti, upelepele, ukuthosa.
Indlela yokulungiselela: usike amaqabunga e-pomelo ne-lettuce abe yizicucu ezincane (ungakusula kahle), uhlanganise konke, usawoti ukunambitha kanye nopelepele, inkathi ngamafutha omnqumo - isaladi isilungile. Isifiso sokudla!
Isaladi "Ukuqedwa Kwabesifazane"
Izithako: i-pomelo eyodwa, ulethisi, inkukhu eyodwa, amantongomane kashizi, ushizi we-parmesan, uwoyela omnqumo nosawoti.
Indlela yokulungiselela: okokuqala, kuyadingeka ukuthosa uswidi wenkukhu emafutheni omnqumo, kuthi ngemuva kokuthi selehlile, uthathe izicucu ezincane. Ngemuva kwalokho sikhonkotha i-pomelo, siyisonge bese siyikhulula kwifilimu. Sula amaqabunga e-lettuce, usike ushizi ube yimichilo emincane, uhlanganise konke (inkukhu, amaqabunga, ushizi, pomelo namantongomane), usawoti kanye nenkathi ngamafutha omnqumo.
Izithako: uhhafu we-pomelo, i-orange eyodwa encane, i-banana eyodwa, ama-apula amabili, ama-kiwi amabili, amapharele amabili, i-sundae eyodwa ye-gram eyodwa no-chocolate omnyama.
Indlela yokulungiselela: ikhasi zonke izithelo, uthathe izingcezu ezincane (zingaba amashubhu noma oonxantathu) uhlanganise. Ngemuva kwalokho sigcwalisa u-ayisikhilimu otholakele bese sihlela kuma-vase amahle. Lapho ukhonza, ufafaza ushokoledi owenziwe nge-chocolate.
Amavithamini: C no-beta-carotene (provitamin A)
I-Ascorbic acid (Vitamin C) igama lomkhiqizo wazo zonke izithelo zezithelo zosawoti. Isidingo sansuku zonke somzimba womuntu sinikezwa ngama-gramu ayi-200 we-pomelo pulp. Iphesenti likhulu kunama-tangerine, kepha lingaphansi kunawolintshi.
IBeta carotene nayo ikhona ku-pomelo. Lawa mavithamini akha ukungatheleleki futhi abandakanyeka ezinqubweni eziningi ze-biochemical zomzimba womuntu. Awekho amanye amavithamini amaningi ku-pomelo.
Izithelo zeCitrus zihluka kakhulu ekwakhekeni kwamaminerali, kepha ngayinye inezinto eziningi ezilusizo. Futhi i-pomelo nayo ihlukile.
I-Pomelo pulp iqukethe i-fiber, ethuthukisa inqubo yokugaya futhi isize ukuhlanza amathumbu futhi ithuthukise ukuhamba kwegazi.
I-ethaconic acid etholakala ezitsheni ezivamile. Le nto inomphumela we-diuretic. Yingakho umkhiqizo uletha impumuzo ku-edema yemisuka ehlukahlukene: ngenxa yezinkinga zezinso nezinye izitho zohlelo lokuchama, nge-edema yamaphaphu ngisho nengqondo (kufaka phakathi ukulimala, ukuqunjelwa). Kukhona futhi ukwehla okuncane komfutho wegazi ophakeme.
Ukuphuma okuthe xaxa koketshezi (ukuphindaphindeka nokuchama okuningi) kuqala kungakapheli ihora ngemuva kokudla isithelo noma ukuthatha ijusi, umphumela ungahlala amahora ayi-6 noma ngisho nama-9. Ngakho-ke, ungadli i-pomelo eningi kusihlwa. Futhi ngokuvamile, akufanele uyidle ngokweqile - usawoti we-potassium ofanele ugezwa kakhulu.
Ngobuningi obuvumelekile, i-pomelo ayilimazi ngesikhathi sokukhulelwa, izoba nomthelela nasekuqedweni kwe-edema encane.
Imininingwane ejwayelekile, ukwakheka kanye nama-kilojoule amakhalori
IPomelo yi-citrus enkulu kunazo zonke. Ubukhulu obujwayelekile bezithelo buba amasentimitha ayi-16 ubukhulu. I-peel eminyene kodwa i-porous, lapho ihlukaniswe khona kalula kusuka ku-lobules yangaphakathi. Izithelo zinambitha usawoti omuncu, ngaphandle komunyu (njengegilebhisi). Umehluko osemqoka kusuka ku-orange efanayo yi-juiciness encane.
Ukwakhiwa kwe-pomelo kufaka phakathi ama-micronutrients alandelayo (ngamagremu ayikhulu ezithelo):
Into Inani (kuma-milligrams)
I-Folic acid 0,02
Ngaphezu kwalokho, i-pomelo iqukethe inani elikhulu le-fiber, elingadonswa ngumzimba, kepha ngosizo lwalo inqubo yokugaya kanye ne-peristalsis (ukukhuthaza ukudla) yamathumbu yenziwajwayelekile.
Izici eziwusizo zamawolintshi
Izazi zokudla zithi izakhiwo ze-pomelo ziyefana negilebhisi, kepha okuqukethwe amavithamini A no-C kuwo kuphezulu kakhulu. Kuyasiza ezinganeni ngoba kuvimbela ukusweleka kwe-Vitamin A, okudingekayo ekuthuthukiseni okujwayelekile kwezicubu zamathambo. Kwabesilisa abadala, i-pomelo iyasiza ngoba ukufakwa kwayo ekudleni kwansuku zonke kunciphisa kakhulu amathuba wesifo senhliziyo (ngokungaqondile, lokhu kuthinta umsebenzi we-prostate gland, potency). Kuyanconywa futhi ukuthi abesifazane abakhulelwe baqiniseke ukuthi basebenzisa i-pomelo - lesi sithelo singenye yemithombo yemvelo enkulu ye-folic acid, edingeka kakhulu kuma-trimesters wokuqala nowesibili.
Izici eziwusizo zihlanganisa:
Ukuphuculwa ngokuphelele kokugaya (kusukela amagremu ayikhulu we-akhawunti ye-pomelo mayelana nama-gramu ayi-2 we-fiber),
ukungasebenzi komzimba okwandisiwe (ngenxa yenani elikhulu lamavithamini C),
ukuvunyelwa kokulingana kukasawoti (okuwusizo ikakhulukazi kushukela),
ukukhuphuka kokuphikisana nomzimba (ngenxa yobukhona bamafutha abalulekile ekwakhekeni),
ukuvimbela i-urolithiasis (kepha lapho kukhona i-calculi, ukusetshenziswa kufanele kulahlwe).
Futhi kufanelekile ukusho ukuthi i-pomelo ibhekisela kuzithelo eziphansi zamakhalori. Inani layo lokudla limi ngale ndlela elandelayo (isuselwa kumagremu ayikhulu ezithelo):
amaprotheni - 0,7 amagremu
amafutha - 0,3 amagremu
ama-carbohydrate - aze afike kumagremu ayi-10 (ngokwesilinganiso esingu-6 - 7 amagremu),
amakhalori - 50 kcal.
Ngokwemiyalelo yodokotela, i-pomelo ifakwa emzimbeni wokuba khona kwezifo ezilandelayo:
isilonda se-peptic sesisu kanye / noma i-duodenum,
urolithiasis ngesikhathi sokwanda.
Kuyafaneleka futhi ukucabanga ukuthi i-pomelo ibhekisa kuma-allergen wezithelo. Ngokuvumelana nalokho, nge-hypersensitivity yomuntu ngamunye kufanele ishiywe ngokuphelele.
Kwezinye izimo, ukusetshenziswa njalo kwe-pomelo kungalimaza kuphela isisu ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu lamavithamini C kanye namafutha abalulekile ekwakhiweni kwawo - lokhu kuvame ukukhuphula i-gastritis. Ngakho-ke, uma kunenkambiso yezifo ezingamahlalakhona ezingalapheki zomgudu wesisu, ithuba lokufaka i-pomelo ekudleni kufanele kuboniswane nodokotela wezitho zomzimba.
Izinga lansuku zonke lezithelo lezingane nabadala
Ngokusho kwemiyalo yezazi zezempilo, isilinganiso esifanele se-pomelo somuntu omdala singama-gramu ayi-200, ezinganeni - aze afike ku-150 amagremu. Lokhu kungaphezulu kokunele ukuhlinzeka umzimba ngamavithamini C, i-folic acid nensimbi. Uma isetshenziswa ngesimo sejusi esisanda kufakwa, khona-ke lo muthamo nawo ubalulekile, kepha okuqukethwe kwe-fiber kuwo kuyancishiswa. Ubungako obujwayelekile bezingane zingama-800 amagremu, ngokulandelana, kufanele anele kuwo wonke amalungu omndeni omncane. Ngendlela, kunconywa ukuthi udle i-pomelo ekudleni kwasemini - umsebenzi wohlelo lokugaya ukudla ngalesi sikhathi yiwo ophakeme kakhulu.
Ungayidla kanjani i-pomelo? Okuhle kunakho konke - okusha. Kepha, njengezinye izithelo zamawolintshi, kuvunyelwe ukuyisebenzisa ekuphekeni izinhlobo ezahlukahlukene zamasaladi ezithelo, njengezengezo zenyama, ezoshukela. Izithelo ezibunjiwe zingagcinwa esiqandisini isikhathi esingangezinsuku ezi-3 (into esemqoka ukusebenzisa isitsha esivaliwe).
Ama-nuances wokudla i-pomelo
Ngesikhathi sokukhulelwa, i-pomelo ayenzeki kuphela, kepha futhi idinga ukufakwa ekudleni, ngoba iqukethe amavithamini e-B ne-folic acid - la ma-microelements abaluleke kakhulu ekulinganiseni ukulingana kwe-hormonal nokwakha i-neural tube yomntwana ongakazalwa. Njengomthetho, odokotela banxephezela ukungabibikho kwamavithamini ngalesi sikhathi ngokunquma amavithamini okwenziwa, kodwa i-bioavailability yabo (okuwukuthi, imunxwe kahle kangakanani) iphansi kakhulu kunaleyo yemvelo. Kubaluleke kakhulu ukugcina ibhalansi evamile yamavithamini kowesifazane okhulelwe ku-trimester yokuqala. Kunconywa ukusebenzisa ama-200 - 300 amagremu we-pomelo ngosuku (qiniseka ukusebenzisana ne-gynecologist, intombazane ebhaliswe kuyo).
Ngokuncelisa ibele, ukusetshenziswa kwezithelo kuvunyelwe. Kepha kubalulekile ukukhumbula ukuthi:
kunobungozi bokusabela komzimba, ngakho uma uvula i-pomelo ekudleni kufanele ubonwe udokotela wezingane,
qala ukudla kuphela lapho ingane ingaphezu kwezinyanga ezintathu ubudala.
Futhi, njengoba umkhuba ukhombisa, ukusetshenziswa kwe-pomelo kuthinta kahle ukwakheka kwamakhemikhali obisini lwebele. Ukudla okwanele kwansuku zonke kufika ku-200 amagremu ngosuku (qala ngama-gramu angama-50, kancane kancane akhule).
Kepha ukondla okulinganiselayo, okungukuthi, ukuhlangana nokuncelisa ibele, kunconyelwa ukunikeza i-pomelo ezinganeni kusuka eminyakeni eyi-2 kuphela, hhayi ngaphambili. Lokhu kungenxa yengozi ephezulu yokusabela komzimba. Kulokhu, kufanele kunikezwe ujusi kuphela oxutshwe namanzi ngesilinganiso esingu-1 kuya ku-5. Okokuqala, ama-milliliters ayi-10 ngosuku, bese enyuka ngamamililitha ayi-5. Uma kwenzeka ukungezwani komzimba (okuvame kakhulu ukuthi kube ukuqunjelwa), umshanelo womshanelo kuzodingeka ushiywe ngokuphelele kuze kube yilapho usumdala.
Ngezifo zamapheshana emathunjini (kufaka phakathi i-pancreatitis, catarrhal gastritis), kuvunyelwe ukungasebenzisi ngaphezu kwama-gramu ayi-10 ngasikhathi. Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho kulokhu, njengoba kukhethwa umthamo ofanele ngokususelwa esithombeni somtholampilo wesiguli.
Ekudleni noma lapho wehlisa isisindo, akunakunqunyelwa ekusetshenzisweni kwe-pomelo. Kufanele unamathele ejwayelekile yansuku zonke yama-gramu ayi-200.
Izindlela zokupheka ezilula ezenziwe ekhaya ezisebenzisa i-pomelo
I-Pomelo isetshenziswa kaningi lapho kulungiswa imaski yobuso. Indlela elula elula yokusebenzisa kwayo:
thatha izipuni ezimbili zekhasi elisha,
hlanganisa nesipuni esisodwa sokhilimu omuncu omuncu,
gaya nge-blender ku-homogeneous mass (iphalishi).
Faka lesi sakhi imizuzu engama-20 njengemaski, bese uhlanza ngensipho. Amantombazane amaningi athi ikhambi elinjalo ngenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuvimbela imibimbi yangaphambi kwesikhathi. Kepha akufanele uyisebenzise kaningi kunesikhathi esingu-1 ngeviki - ukukhuluphala kwamafutha abalulekile kungakhipha isikhumba ngokweqile.
Kepha kulabo abafuna ukukhipha amaphawundi ambalwa ongeziwe, ungancoma i-cocktail ngokusekelwa kwe-pomelo ne-ginger infusion. Ilungiselelwe kanjena:
nquma kahle noma ugobe amagremu ama-30 wempande yejinja, uthele engilazini efudumele, ugcizelele okungenani amahora angama-2,
ukumnika okulandelayo kuhlungwa ngezendlalelo eziningana ze-gauze futhi kuxutshaniswe namanzi ayi-200 kuya kwangama-250 wejusi le-pomelo elisanda kufakwa,
engeza amathisipuni ayi-1.5 uju kule ngxube (ongakwazi nokuningi ukunambitha),
engeza isinamoni (ngokoqobo esicongweni sommese).
Leli jogoji linconyelwa ukuphuza kancane, ukwelula ukwamukela okungenani imizuzu engama-60. Ngenxa yokubakhona kwe-ginger ekwakhiweni kwayo, kuthambisa isifiso sokudla, futhi ngasikhathi sinye sigcwalisa umzimba ngama-carbohydrate “asheshe”, ahlanganiswe ngokushesha abe amandla.
Futhi ngezinyo elimnandi, ungeluleka ngesisekelo se-pomelo ukulungiselela i-dessert yobisi. Kuzothatha (ukuthola ama-4 servings):
0.4 amalitha obisi
U-0,4 amalitha weyogathi (okwenziwe ekhaya kungcono, ngoba ayinazo izithasiselo zezithelo),
ushukela we-vanilla (1/2 pack noma i-5 amagremu),
2 wezipuni kashukela
isiraphu ye-maple noma yamagilebhisi (ungathatha noma yikuphi okunye, kepha ngalezi zomelo kuhlangene kangcono),
2 wezipuni ze-cornmeal
I-1 pomelo ephakathi (i-pulp izodinga ama-gramu ayi-600).
Konke kulungiselelwe kalula: inyama yomshanelo inqunywe ku-cubes amancane, ehlanganiswe isiraphu ye-maple imizuzu engama-20. Ngemuva kwalokho konke lokhu kubekwa obisini futhi kuphekwe emlilweni ophansi imizuzu eyi-12. Ekupheleni - engeza 2 wezipuni ze-cornmeal ukuze uqwebe "ukuhuduzela" okuphumayo. Ngemuva - susa ohlangothini bese upholile. Endishini ehlukile, iyogathi, ushukela ojwayelekile kanye ne-vanilla kuyancitshiswa bese kushaywa ngesimo ku-foam obukhulu (mhlawumbe yi-blender). Kuhlala kuphela ukuxuba i-yogurt ne-pudding, uthele i-dessert engilazini bese uhlobisa ngamaqabunga e-mint, ama-chocolate we-chocolate, nesinamoni. Kufanele udle ubolile (ungangeza ama-ice cubes) ambalwa.
Yize i-pomelo ingatholakali njalo emashalofini ezitolo zaseRussia - ukubuyekezwa mayelana nayo kungokwanele kwi-Intanethi. Ezinye izibonelo zingakhonjwa.
Ngenxa yokuqukethwe kwamavithamini nezinye izinto ezizuzisayo, lesi sithelo sisekela amasosha omzimba futhi siyasiza ekulweni nemfuluwenza. Okubalulekile (ikakhulukazi kwabesifazane) i-pomelo iyakwazi ukudiliza amafutha ngakho-ke kulabo abanciphisa isisindo kungaba kuhle ukujwayelana nalo mkhiqizo.
Ukujwayelana kokuqala okungaphumelelanga ngalesi sithelo esidlule eminyakeni eminingi edlule, futhi angizange ngijabule ngokunambitheka kwawo, kwakubabayo, kumile ... O, bengiyokwazi ngaleso sikhathi ukuthi ngizame ngokuphelele! Umuntu omaziyo wesibili muva nje, futhi njengomuntu othanda izithelo zika-citrus, wathandana ngamandla aphindwe kabili.
Ukunambitheka akujwayelekile, kwezithelo zamawolintshi kuvezwe buthaka kakhulu: akumunyu, ngokungafani nolamula, hhayi okubabayo njengegilebhisi, kungakhanyi njengawolintshi noma i-mandarin, ngamagama, akunantanga futhi kuyaqabula, kepha kuphela uma kuvuthiwe
Ithonya pomelo isisindo somzimba
Isifo sikashukela kanye nokukhuluphala kuhambisana kakhulu. Amangqamuzana amafutha athela i-hormone resistin, elawula ukuzwela kwezicubu kwe-insulin futhi ethinta ukuthathwa koshukela ngama-adipocytes (amaseli we-adipose izicubu). Ukukhuluphala umngani oqhubekayo weziguli eziningi ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ngokuncipha kwesisindo somzimba, isidingo semithamo ye-insulin siyancipha.
Ngakho-ke, ukudla okulwa ne-antidiabetic kuhloselwe kakhulu ukunciphisa ukuncipha kwekhalori. Ukuze wehlise isisindo, umuntu kumele athole amakhalori ambalwa ngokudla kunokuchitha. I-pomelo iqukethe kusuka ku-25 kuye ku-39 kcal (nge-100 g), kuya ngezinhlobonhlobo. Ukusetshenziswa njalo kwe-fetus kuzosiza isifo sikashukela ukukhipha amakhilogremu angeziwe.
I-Pomelo enesifo sikashukela sohlobo 2 isiza ukwehlisa isisindo ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu lemicu yezitshalo ezinkulu ne-elastic. Zivusa amathumbu futhi zivimbele ukuqunjelwa. Izithelo ezinkulu zamawolintshi zisheshe zigcwalise isisu futhi zibangele umuzwa wokugcwala. Kubandakanya i-pomelo ekudleni, ungakugwema ukudla ngokweqile.
Ama-pectins akhona eshidini le-fetus lapho ehlangana khona namanzi. Ukuhamba ngamathumbu, amunca i-cholesterol, izinto ezinobuthi kanye nama-microorganisms e-pathogenic. Ngemuva kokudla izithelo, i-microflora yamathumbu ivamile futhi i-metabolism ithuthuka.
Ukwehla kwesisindo nakho kwenzeka ngenxa yokuba khona kwezinto ezikhethekile ku-fetus: inositol ne-lipolytic enzyme lipase. I-Inositol isheshisa imetabolism, ibamba iqhaza kwi-metabolism yamafutha futhi ishise amafutha ngokweqile. U-Lipase uphula amafutha futhi awasuse emzimbeni kanye nesitashi.
Umphumela we-fetus kushukela wegazi
Iziguli ezinesifo sikashukela kufanele zikhethe imikhiqizo yemenyu yansuku zonke, eqondiswa inkomba yazo ye-glycemic index (GI). Inkomba ye-Glycemic iyinkomba ebonisa inani lokunyuka kokuhlungwa kweglue glucose ngemuva kokudla umkhiqizo othile. Lapho ikhula i-GI ngokwengeziwe, ikhuphuka amathuba okuthi i-jumper ebukhali kushukela ifike ezingeni eliphakeme kakhulu. Kuyenqatshelwa ukufaka ukudla nge-GI okweqile kwamayunithi angama-70 ekudleni. IGI pomelo iyunithi engama-30. Ngakho-ke, kuvunyelwe ukusebenzisa ngesifo sikashukela.
Ukuhlukaniswa kwezithelo kuqukethe i-naringin ebalulekile yezinto eziphilayo ezisebenzayo. INaringin ikhulisa ukuzwela kwezicubu zomzimba kuyi-insulin. Ngibonga yena, i-pomelo ekuhlonzeni isifo sikashukela sohlobo 2 kusiza ukubuyisela ukusetshenziswa kweglucose. I-fetus nayo inezinto ezinjenge-insulin-lycopene.
Ukwehlisa ushukela wegazi ngesikhathi sokudla kwe-pomelo kwenzeka ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu lemicu ye-fiber ne-pectin. Yehlisa ijubane inqubo yokufakwa kwe-carbohydrate emathunjini futhi ivimbele ukuvela kokugxuma okubukhali kushukela wegazi.
Izithelo ziqukethe kusuka ku-6.7 kuye ku-9.6 g wama-carbohydrate (nge-100 g). Ukudla okunama-carbohydrate kungenza ama-50-60% wokudla okuphelele kwesifo sikashukela. I-Endocrinologists incoma ukuthi iziguli zithathe indawo yokudla enamafutha ngokudla kwezitshalo ngama-carbohydrate.
Uma isiguli sesaba ukwanda okubukhali koshukela wegazi ngemuva kokudla i-pomelo, khona-ke kunconywa ukuyidla kanyekanye ngamantongomane. Amantongomane anciphisa ukuguqulwa kwama-carbohydrate abe yi-glucose.
Amavithamini njengengxenye ye-pomelo
Ukugcwala okukhulu kwe-glucose egazini likashukela kuvusa ukwakheka kwenqwaba yama-radicals yamahhala. Zibangela izinqubo ze-oxidative emangqamuzaneni, okuholela ekubhujisweni kwezindonga zemithambo yegazi. Izinguquko ze-pathological zibangela umfutho wegazi ophakeme, isifo senhliziyo nesifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Njengezinye izithelo zomawolintshi, izithelo zinothile ku-vithamini C. Uqukethe namanye ama-antioxidants (uvithamini E, naringin, lycopene, beta-cryptoxanthin). I-Pomelo enesifo sikashukela inciphisa ingozi yokuba nezifo zesistimu yethambo nenhliziyo.
Ukuthuthukiswa kwesifo sikashukela kwenzeka ngemuva kwesizinda sokuphazamiseka kwe-metabolic. Ngakho-ke, iziguli zivame ukuhlushwa ukuntuleka kwamavithamini. Ukushoda okungapheli kwamavithamini kuholela ekunciphiseni ukungazethembi. Uma isiguli sihlala sizizwa sikhathele futhi sinezinkinga eziningi zezifo, singenawo amavithamini. Amavithamini C no-E ashukumisa izivikeli mzimba futhi andise amandla omzimba okumelana nezifo. IVitamin E inganciphisa isidingo se-insulin. Ngaphezu kwe-C ne-E, i-pomelo iqukethe amavithamini B1, B2, B6 ne-PP.
Vitamin B1 idlala indima enkulu enqubweni yamandla we-metabolism kanye nokuhlanganiswa kwama-carbohydrate. Isifo sikashukela, isidingo se-thiamine sikhuphuka kakhulu. Ukusetshenziswa njalo kwe-pomelo kusiza ukunciphisa ingozi yokuba nezinkinga zesifo sikashukela: i-cardiomyopathy (izinguquko ze-pathological emisipha yenhliziyo).
I-Vitamin B2 ibalulekile ekwenzeni inqubo ye-metabolic (ama-carbohydrate namaprotheni) ibejwayelekile. URiboflavin uvikela i-retina emiphumeleni eyingozi yemisebe ye-ultraviolet. Kuyasiza ukugcina i-visual acuity futhi ivumela iziguli ezinesifo sikashukela ukuthi zigweme ubunzima obunzima: i-retinopathy (ukulimala kwe-retina ye-eyeball).
Ngenxa yokuvelela kokudla kwamaprotheni ekudleni, abanesifo sikashukela badinga i-vitamin B6. I-Pyridoxine ihlinzeka ngamaprotheni metabolism ajwayelekile. Uma ikhona ekudleni, iziguli zihlupheka kancane ngenxa yomonakalo ohlelweni lwezinzwa kwisifo sikashukela (ukuzindla, ukugwinya). Vitamin B6 yehlisa ukumelana ne-insulin. Kusetshenziswa ekuhlanganiseni kwe-hemoglobin. Isidingo sevithamini B6 sanda kakhulu ezigabeni zokugcina zesifo sikashukela, lapho kukhona umsebenzi wezinso ophazamisekile. Ngenxa yokwehluleka kwezinso okungamahlalakhona, iziguli zilahlekelwa ngamaprotheni amaningi futhi zinenkinga ye-anemia.
Ngakho-ke, izakhiwo eziwusizo. I-pomelo ekwakhiweni kwayo inama-macro- kanye nama-microelements amaningana, adingeka ngokuphuthumayo umzimba womuntu onesifo sikashukela. Iron equkethwe ku-fetus ingavikela ukukhula kwe-anemia.
Izici ezizuzisayo zomshanelo kungenxa yokuba khona kwe-potassium ne-magnesium kuyo. Ama-macronutrients enza kube ngokwejwayelekile umfutho wegazi futhi avimbele ukuvela kwegazi. I-potassium iyadingeka ukukhiqizwa kwamaprotheni, ukuguqulwa kwe-glucose ku-glycogen kanye nokufakwa kweglucose yizicubu.
Ku-isifo sikashukela i-mellitus, ukuntuleka kwe-phosphorus, zinc kanye ne-manganese kuvame ukwenzeka. Ngenxa yokuntuleka kwe-phosphorus ne-zinc, ukulawulwa kwamazinga kashukela wegazi kuya ngokuya kukhula, futhi inqubo ye-biochemical ye-metabolism yamafutha emzimbeni iyashintsha. IManganese iyabandakanyeka ekungeniseni ushukela futhi isiza ekunciphiseni ukuqina kwayo egazini. Ukushoda okubucayi kwama-micronutrient kungadala ukungabekezeleli ushukela. Ngokusebenzisa njalo i-pomelo, ungabuyisela amazinga adingekayo ngokomzimba we-phosphorus, manganese ne-zinc.
Ungayidla kanjani i-pomelo
Izinzuzo nokulimazeka komkhiqizo kuncike kwindlela yokusetshenziswa kwayo nobungako. UPomelo ubhekisele kwimikhiqizo yeqembu eliphuzi (ukudla okudla okukhona ngokudla okukhona emzimbeni). Zingadliwa ngokulinganisa noma ngomgomo "wokuhlukanisa phakathi." Ingxenye ephezulu evunyelwe yomkhiqizo ingama-200 g ngosuku.
Uma isiguli sitholwa sinesifo esithambile esilinganiselayo, khona-ke ikota yengane iyavunyelwa ukudliwa nsuku zonke. Uma izithelo zikhulu kakhulu, udinga ukunciphisa umthamo.
Ingxenye yomkhiqizo onconyiwe yinombolo yezikwere ezilingana nentende yesandla sakho. Uma lesi sifo sihambisana nezinkinga ezinkulu, kungcono ukungadli izithelo ezingaphezu kwe-100 g ngosuku. Ingxenye yayo yansuku zonke kufanele ivumelane nodokotela oholayo.
Kuyinto engathandeki ukucubungula umshanelo futhi uyisebenzise ngemikhiqizo equkethe ushukela. Akufanele udle ama-jams, ama-mousses, i-jelly kanye ne-jam evela kwi-pomelo. Iziphuzo ezinoshukela azinconywa. Umkhiqizo osefomeni eyomile neyomile akumele usetshenziswe ngabanesifo sikashukela. Noma yikuphi ukwelashwa kwezithelo kukhulisa inkomba ye-glycemic yesitsha.
I-Pomelo isetshenziswa kangcono okusha. Hlukanisa ukwahlukaniswa okumhlophe kusuka ku-lobules akufanele kube. Izigaba zingumthombo wezinzuzo zesifo sikashukela. Kuvunyelwe ukuphuza ujusi kusuka ku-pomelo. Kufanele ilungiselelwe ngesandla noma ngokucindezela okubandayo, ukuze ungawubeki umkhiqizo ekushiseni. Ijusi kufanele lidakwe ngokushesha ngemuva kokulungiselela.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi akukho fayibha ku-pomelo juice. Ngakho-ke, inkomba ye-glycemic yesiphuzo izoba ngaphezulu kancane. Kunconywa ukuthi unikeze ukukhetha kuzo zonke izithelo, kunokuba ujusi wawo.
Uma udla i-pomelo ngemuva kokudla, unganciphisa inkomba ye-glycemic yokudla okudliwayo. Kungcono ukuthi uhlukanise ingxenye yansuku zonke ibe izingxenye eziningi bese uyidla usuku lonke. Lokhu kuzosiza ukugcina amazinga kashukela egazini esezingeni elifanayo.
U-Pomelo uvame ukudala ukungezwani komzimba. Ngakho-ke, abantu abaphethwe yi-allergies nezithelo ze-citrus abakwazi ukudla isithelo esikhulu. Akunconywa ukuthi udle izithelo zabesifazane abakhanyayo. Zingadala ukungezwani kwengane.
Akuvunyelwe ukudle i-fetus lapho kunezifo zegciwane lesisu, elihambisana nokwanda kwe-acidity. I-Contraindication ukuthambekela kokushiswa yinhliziyo.
Abantu abanesifo sikashukela akufanele banciphise umthamo otuswayo womkhiqizo. Ngenxa yokuba khona kwenani elikhulu le-potassium (235 mg nge-100 g), i-pomelo inganciphisa ukuguquguquka kwegazi ibe emazingeni abucayi.
Ngokuqapha, kuyadingeka ukudla i-pomelo ezigulini ezitholakala ukuthi zinesifo i-gastritis, hepatitis, nephritis noma i-colitis.
Ukusetshenziswa kwe-pomelo kungathinta umphumela wezidakamizwa. Iziguli ezizothatha ama-statin zidinga ukwenqaba ukufaka i-pomelo kwimenyu.
Ku-isifo sikashukela i-mellitus, ukuntuleka kwe-phosphorus, zinc kanye ne-manganese kuvame ukwenzeka. Ngenxa yokuntuleka kwe-phosphorus ne-zinc, ukulawulwa kwamazinga kashukela wegazi kuya ngokuya kukhula, futhi inqubo ye-biochemical ye-metabolism yamafutha emzimbeni iyashintsha. IManganese iyabandakanyeka ekungeniseni ushukela futhi isiza ekunciphiseni ukuqina kwayo egazini. Ukushoda okubucayi kwemicronutrient kungadala ukungabekezeleli ushukela. Ngokusebenzisa njalo i-pomelo, ungabuyisela amazinga adingekayo ngokomzimba we-phosphorus, manganese ne-zinc.
Uma isiguli sitholakala sinesifo esithambile esilinganiselayo, sivunyelwe ukudla ikota yengane nsuku zonke. Uma izithelo zikhulu kakhulu, udinga ukunciphisa umthamo.
Ingxenye yomkhiqizo onconyiwe yinombolo yezingcezu ezilingana nentende yesandla sakho. Uma lesi sifo sihambisana nezinkinga ezinkulu, kungcono ukungadli izithelo ezingaphezu kwe-100 g ngosuku. Ingxenye yayo yansuku zonke kufanele ivumelane nodokotela oholayo.
Kuyinto engathandeki ukucubungula umshanelo futhi uyisebenzise ngemikhiqizo equkethe ushukela. Akufanele udle ama-jams, ama-mousses, i-jelly kanye ne-jam kusuka kwi-pomelo. Iziphuzo ezinoshukela azinconywa. Umkhiqizo owomile nowomile akufanele usetshenziswe yisifo sikashukela.Noma yikuphi ukwelashwa kwezithelo kukhulisa inkomba ye-glycemic yesitsha.
Ukwakheka komkhiqizo nezimpawu zawo
UPomelo uyilungu lohlobo lwezithelo zamawolintshi futhi ngenxa yezimfanelo ezifanayo zokunambitheka uvame ukubizwa ngokuthi yi-Chinese grapefruit. Njengabo bonke abamele lolu hlobo, lesi sithelo esingavamile sicebile ngamavithamini C no-A. Ngaphezu kwalokho, siqukethe:
okunamafutha acid ezuzisayo
amaminerali anjenge-iron, i-sodium, i-phosphorus, i-potassium, njll.
Izithelo ezivuthiwe ezisezingeni eliphakeme zinombala wesikhumba okhanyayo ngokulinganayo ngaphandle kwamabala namabala. Izithelo ezin peel eminyene zizokoma futhi zingamnandi. Kodwa-ke, isipikili se-pomelo kunoma yisiphi isimo sizoba nesigqoko esiqinile (imvamisa sifinyelela ku-2 amasentimitha). Izithelo ezikhethwe kahle kuphela ezingagcwalisa umzimba ngezakhiwo ezizuzisayo.
Izici zeminye imikhiqizo ewusizo kwabashukela zingatholakala kumagazini ama-Mushrooms kanye noshukela!
Yini inzuzo nokulimala kwe-pomelo yabanesifo sikashukela?
Ososayensi bathi i-pomelo ilusizo olukhulu kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 2. Izazi zezempilo zincoma ukukufaka ekudleni kwakho wonke umuntu onalesi sifo. Ijusi eliswidi elisanda kufakwa kulesi sithelo liphilile, ngoba lisebenza ngokuphumelelayo nangobumnene amazinga kashukela (lokhu kusebenza kushukela wazo zonke izinhlobo!)!
Ulwazi oluwusizo kakhulu esihlokweni: Yimaphi amabele angadliwa noshukela wesifo sikashukela 2
Kukhona ama-plus obuhle obukelwa amakhalori, ngoba i-pomelo ngeke ibenze bakhathazeke ngesibalo! Okuqukethwe kilojoule kwesibeletho kungama-kilojoule angamashumi amathathu nanhlanu kuphela! Ngaphezu kwalokho, lesi sithelo esingajwayelekile, sibonga ama-enzyme aqukethe kuwo, asiza ukwehlisa amafutha futhi kusebenze izinqubo ze-metabolic.
Futhi, i-pomelo yohlobo lwe-2 yesifo sikashukela i-mellitus, ngenxa yokuqukethwe kwayo kwe-potassium ne-pectin, isiza ukulungisa umfutho wegazi futhi ilwe nokushisekela ama-plagi atherosclerotic. Muva nje, ososayensi baseBrithani sebefakazele umphumela omuhle walezi zithelo ezinephunga elimnandi kuma-pancreas - imbangela eyinhloko yalesi sifo. Amafutha abalulekile isithelo esicebile asiza izazi zesifo sikashukela zibhekane namagciwane kanye nokubanda ngokushesha.
Manje ngezingozi zokulimala. Lokhu kungashiwo kuphela uma kukhona ukungabekezeleli komkhiqizo noma ukulimala lapho udla ngokweqile. Ezimpawu zokuqala zokuphendula komzimba, kufanele uyeke ngokuphelele ukusetshenziswa kwezithelo futhi uthintane nodokotela.
Ngingayisebenzisa kanjani i-pomelo?
Kuyasiza kakhulu ukusebenzisa lo msebenzi ongafani nesifo sikashukela ngendlela ujusi. Kepha ungayifaka ezitsheni ezahlukahlukene (ngokwesibonelo, amasaladi ezithelo nemifino).
Imininingwane ewusizo kakhulu esihlokweni: iBeetroot ngohlobo 2 sikashukela: izinzuzo nokulimazeka kwezilimo zezimpande
Lesi sithelo sihlanganiswe ngokuphelele nemikhiqizo eminingi, sibanike ukubukeka nokunambitheka okuyingqayizivele. Ngakho-ke, inhlanganisela ezivame kakhulu yilezi:
ngamakhambi amasha anamaqabunga,
UPomelo onesifo sikashukela sohlobo 2 uzokusiza uguqule indlela odla ngayo noma ushintshe amaswidi!
UPomelo ungummeleli wezithelo zamawolintshi, onconyelwa iziguli ezinesifo sikashukela. Igcwele amavithamini A no-C Equkethe:
Izithelo ezisezingeni eliphakeme zinombala obushelelezi ngaphandle kwamabala noma amabala. Uma i-peel yezithelo ihlanganisiwe, izithelo ngeke zibe nokunambitha futhi zomile. Kulokhu, engxenyeni engenhla yesibeletho kufanele ibe ne-apex eminyene kufika ku-2 cm ububanzi.
Zonke izinto ezilandelwayo zithonya futhi zithinta izinqubo zomzimba womuntu. Izici ezinenzuzo zezithelo zisiza ukwenza ngcono ukwakheka kwesikhumba futhi zisuse ubuthi emzimbeni.
Ukulimaza nokuhlomula pomelo
Odokotela bacebisa ukuthi kudliwe i-pomelo ngohlobo 1 nesifo sikashukela 2, ngoba izithelo zondla ngamavithamini. Ijusi le-Pomelo lehlisa izinga le-glucose emzimbeni womuntu. Le nqubo ukuvikela kweqa ngohlobo 2 sikashukela.
Izithelo zisezingeni eliphansi lekhalori (35 kcal), ngakho-ke asikho isidingo sokukhathazeka ngokuthi ukudliwa kwaso kuzosithinta kanjani isibalo: amaphawundi angeziwe angeziwe. Ngaphezu kwalokho, isithelo sisiza ukulawula isisindo, saphula amafutha sisebenzisa ukwakheka okuhle kwama-enzyme. Ngenxa ye-potassium ne-pectin esithelweni, ilawula umfutho wegazi futhi isule ama-atherosulinotic plaque.
UPomelo unomphumela omuhle kuma-pancreas, okuyingozi kwabanesifo sikashukela. Ngenxa yamafutha abalulekile, umzimba womuntu ungabekezelela kalula izifo ezibangelwa amagciwane kanye nokutheleleka, ngenkathi ukhula nokungazeleleki, ukuthuthukisa impilo jikelele.
Izithelo zilimaza kuphela abantu abanokungakubekezeleli okuthile, noma ngomthamo owandayo wokudla. Uma udla umkhiqizo we-citrus ngamanani amakhulu, kuzovela ukungalingani.
Ukusetshenziswa okuvumelekile kwe-pomelo
Umbungu ungadliwa ngohlobo 2 sikashukela
Inkomba ye-glycemic ye-pomelo ingama-30 amayunithi, futhi lokhu kungaphansi kakhulu komkhawulo weziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2. Ngakho-ke i-pomelo enesifo sikashukela sohlobo 2 ingumkhiqizo ongeyona ingozi.
Ingxenye kufanele iqukethe kuze kufike ku-150 g we-pulp, ukuze izithelo ezinkulu zihlukaniswe izingxenye eziningana.
Ijusi elivela kulesi sithelo livunyelwe nokuphuza, kepha ukuze lizuze, lilinganiselwe hhayi ngaphezulu kwe-100 ml ngasikhathi. Yonke imithamo isebenzisa i-pomelo ebalwe udokotela onesifo sikashukela.
IPomelo ihlanganiswe nezitsha ezahlukahlukene, igcwalisa ngazo ukunambitheka okungafani nenye. Izithelo ziqabula noma yisiphi isaladi, ngisho nenyama.
I-Pomelo enesifo sikashukela ihlukanisa ukudla, futhi ukunambitheka kwayo kwenza sikwazi ukujabulela izitsha eziphekiwe ngobumnandi. Yize i-pomelo futhi yelapha ushukela, izithelo zilimaza umzimba uma ungalawuli umthamo.